ရေးသားသူ poemflower at Thursday, May 21, 2009
Anonymous May 21, 2009 at 6:51 AM
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ် ..း)
ပုံပြင်လေးတွေ ဖတ်ရတာ ကြိုက်တယ် ..
Anonymous May 21, 2009 at 7:57 AM
ပုံပြင်လေးကို နားထောင်သွားတယ် ဒါကြောင့် ကျားသစ်တွေ အရောင်လှတာပေါ့နော့် မြွေကြောက်တဲ့ ကျနော်တောင် အရောင်လေး လှချင်လာပြီ အဟဲ
နွယ်ရိုး May 21, 2009 at 11:39 AM
သြော်... ဂလိုကိုး . . . .
Dream May 21, 2009 at 2:18 PM
အော်... ကျားသစ်တွေ ဘာကြောင့်အဲလို အကွက်လေးနဲ့ လှရလဲ ဆိုတာ အခုမှ သိတော့တယ်..
kokomaung.uk May 21, 2009 at 3:01 PM
ကျားသစ်တွေလှပတာ မြွေကို ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်နော်။
ပန်းကဗျာလေးကော ဘာဖြစ်လို့ လှနေပါလိမ့်????
ဟဲ ဟဲ။ စတာနော်။
ပုံပြင်လေး နားထောင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ် :P
ကိုတိုးလေး May 21, 2009 at 8:40 PM
ပုံပြင်လေးဖတ်ရင်းနဲ့ ပဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်နော်။ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ဆည်းဆာသံစဉ် May 22, 2009 at 1:32 AM
ဖတ်လို့ တော့ တော်တော်ကောင်းတယ်...ဒါပေမယ့် ယုံရမှာလားဟင်...ယုံရခက်ကြီးပါလားနော်..:P..။
mgnge May 23, 2009 at 4:15 AM
ပုံပြင်ပြောပြတော့လည်းနားထောင်ရမှာပေ့ါ...။ ပုံပြောကောင်း တဲ့မမပေ့ါ
Welcome May 23, 2009 at 3:49 PM
အပြင်မှာဆို ဘယ်လောက်ကောင်း လိုက်မလဲ၊ အသားအရည်လှတဲ့ ကောင်မလေးဆို ကိုက်လိုက်မှာ ...
Anonymous May 25, 2009 at 2:05 AM
အယ်... ပေါက်ကရဗျာ.... သိတော့ဘူး..
ရွှေပြည်သူ May 30, 2009 at 8:07 PM
ပုံပြင်လေး ဖတ်ရတာ ငယ်ငယ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်သတိရလာမိတယ်... ဖတ်ဖူးတာလေး ပြန်ဖတ်ရင်တောင် ရသမပျက်တာ ပုံပြင်တွေရဲ့ အစွမ်းသတ္တိပဲ ထင်ပါရဲ့... ပြန်ဝေမျှတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေး ပန်းကဗျာရေ...